अम्बाको पात फलभन्दा धेरै उपयोगी, के के छन् फाइदा ?
नेपालमा अम्बा सर्वसुलभ रूपमा पाइने फल हो । नेपालका प्रायः ठाउँमा यसको उत्पादन हुन्छ । तर, मानिसले यसको फल मात्र प्रयोग गर्दछन् । अचम्मको विषय त यो छ कि अम्बाको..
अमेरिकामा भीषण वर्षा, पानीमा डुब्यो ह्वाइट हाउस
काठमाडौं । अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन र भर्जिनियामा सोमवार बेस्सरी पानी परेपछि बाढी आएको छ । त्यहाँ एक घन्टाभित्र ३.३ इन्च पानी परेको छ । शहरका सडकमा पानी पस्यो । ह्वाइट हाउसको..
चार दिनसम्म भारी वर्षाको संभावना, कुन कुन ठाउँमा हुँदैछ बर्षा ?
Posted on Jul 08 2019
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै आगामी चार दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतमा रहेको न्यून चापीय रेखा ुपानी पर्ने..
१७ वटा बैंक मर्ज हुने, कुन कुन बैंकले राष्ट्र बैंकमा गरे प्रतिवद्धता सूचिसहित
काठमाडौं । १७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाए । यो तथ्यांक आइतबार साँझसम्मको हो । ‘आइतबारसम्म १७ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष लिखितरुपमा मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका छन्,’..
बैंकबाट ऋण दिने भन्दै बलात्कार गर्ने बैंक मेनेजर पक्राउ
काठमाडौं । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सीयास्थित नेपाल–बंगलादेश बैंक शाखा कार्यालयका प्रमुख अमित बास्तोलालाई बलात्कार आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंक मेनेजरलाई ५ दिन अगाडी नै पक्राउ गरिएको भएपनि प्रहरीले भन..
...............यसकारण मैले राजपाठ परित्याग गरें ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै लेख
सिंगो नेपाल राष्ट्रका निर्माणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशवृक्ष, प्रजातन्त्रदाता श्री ५ त्रिभुवनको पौत्र र नेपाली राष्ट्रवादका पृष्ठपोषक राजा महेन्द्रको मध्यम पुत्र एवं विकास चिन्तक राजा वीरेन्द्रका भ्राताका रुपमा हाम्रो मातृभूमि..
चीनमा लुगा खोल्न प्रतिबन्ध, खोलेमा जरिवाना लगाइने
Posted on Jul 05 2019
काठमाडौं . चीनमा सार्वजनिक स्थानमा शर्ट खोलेमा जरिवाना तिनुपर्ने नियम आएको छ । चीनको शेनडोङ प्रान्तमा नयाँ नियम लागू भएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार, मानिसलाई असामाजिक व्यवहार रोक्नका लागि यसलाई..
दाइजो माग्न आएका ज्वाईँलाई रुखमा बाँधेर कुटपिट
Posted on Jul 03 2019
काठमाडौं । भारतको बिहारस्थ्ति मुजफ्फरपुर गाउँमा एक ज्वाईँलाई दाइजो मागेर सताएको भन्दै ससुराली पक्षले रुखमा बाँधेर कुटपिट गरेका छन् । मुजफ्फरपुरको सुमेरा गाउँमा यो घटना भएको हो । सुमेराका अवधेश कुमारलाई..
राजापुर । मरेको बाघको जुँगा उखेल्नुलाई परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषार्थ मानिँदैन । तर वातावरण सचेत आधुनिक राज्यमा त्यो विषय महङ्गो पर्छ । बर्दिया जिल्ला अदालतले हालैको आफ्नो फैसलामा यसको पुष्टि..
अब को अपराधी हो ? अनुहार रोबोटले भनिदिन्छ !
काठमाडौं । प्रहरीले केरकार गर्दा अपराधी झूटो बोलिरहेको छ कि सत्य भन्ने कुरा अब रोबोटले अपराधीको अनुहारको भावभंगिमा हेरेर थाहा पाउने भएको छ । लन्डनको स्टार्टअप फेससफ्टले कृत्रिम प्रज्ञायुक्त सिस्टम तयार..
सरकारकै सहयोगमा अमेजन रेनफरेस्ट फडानी, प्रत्येक मिनेटमा १ हेक्टर बन फडानी
अमेजन रेनफरेस्ट तीव्र गतिमा फडानी भइरहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्याटेलाइट तस्बिरमा देखिए अनुसार प्रतिमिनेट एउटा फुटबल मैदान जति अमेजन जंगलको भाग फडानी हुने गरेको छ । ब्राजिलका नयाँ..
छोरीलाई १० हजार, भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता १६ सय
काठमाडौं । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अब छोरी जन्मिनेबित्तिकै १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने भएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ‘बैंक खातामा छोरी,..
काठमाडौं महानगरभित्र अनाधिकृत पार्किङ गरे १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अनधिकृत रुपमा पार्किङ गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब होसियार बन्नुहोस । किनभने काठमाडौं महानगरपालिकाले यसरी अनधिकृति रुपमा पार्किङ गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने..
पाँच वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको रासनभत्ता, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । पाँच वर्षपछि नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता बढ्ने भएको छ । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी बढेको रासनभत्ता दिन लागेको हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रहरीको रासनभत्तामा चार..
भिन्न कार्ड प्रयोग गरि एटिएमबाट पैसा निकाल्ने राजु कुमार पाण्डे पक्राउ
Posted on Jun 22 2019
काठमाडौँ । विभिन्न कार्ड प्रयोग गरि एटिएमबाट पैसा निकाल्ने राजु कुमार पाण्डे पक्राउ परेका छन् । बारा जिल्लाको पिपरपानी वडा नं ७ स्थायी घर भै काठामाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३१..
सन्दीप र सोमपाल ग्लोबल टी–२० क्रिकेट लिगमा अनुबन्ध, कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लिग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी क्यानाडाको आधिकारिक ग्लोबल टी– ट्वान्टी क्रिकेट लिगका लागि अनुबन्ध भएका छन् । राष्ट्रिय टोलीका सदस्य..
ट्रम्पद्वारा इरानमाथि आक्रमणको आदेश रद्द
अमेरिकी मिडिया रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ईरानमाथि जवाफी आक्रमण गर्न आदेश दिए र केही समयपछि उक्त आदेश फिर्ता लिएको खुलेको छ । ट्रम्पले जवाफी सैन्य कारबाहीका लागि अनुमति दिए..
लज्जास्पद हारसँगै मनाङ एएफसी कपबाट आउट
काठमाडौं । नेपाली लिग च्याम्पियन सिग्नेचर मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लबले एएफसी कप अन्तरगतको पाँचौ चरणको खेलमा लज्जास्पद हार बेहोेरेको छ । पाँचौ खेलमा मनाङले बंगलादेशको ढाका अवहानी लिमिटेडसँग ५–० को लज्जास्पद हार बेहोरेको..
ट्रम्पले अर्को सातादेखि लाखौं आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने, कति पर्लान् नेपाली ?
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को सातादेखि लाखौं गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गरिने बताएका छन्। मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यागमन र भन्सार कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीका अधिकारीहरूले अर्को सातादेखि..
अन्तरिक्ष युद्धको तयारीमा भारत, यसरी भयो पाँचौं राष्ट्र
काठमाडौं । मिसन शक्तिको सहयोगमा भारतले अन्तरिक्षमा उपग्रहलाई एसेट रकेटबाट खसालेको थियो । यो सफलतापछि अब अन्तरिक्षमा सुरक्षाका लागि भारतले अर्को एजेन्सी हुने भएको छ । यसको नाम रक्षा अन्तरिक्ष..
यस्ता छन् करोडपति बन्ने सजिला उपायहरू
Posted on Jun 09 2019
मानिसले दैनिक काम गर्नुपर्ने एकमात्रै कारण हो, पैसा कमाउनु । आरामको जीवन जिउनका लागि मानिसहरु दैनिक काम गर्छन् । तर भनेजति पैसा कमाउन (बचत गर्न) सक्दैनन् । यो आलेखमा यस्ता केही..
यी हुन् संसारका सबभन्दा महंगा १० किताब, कुनको मूल्य कति ?
Posted on Jun 08 2019
किताबको मूल्यको महत्त्व त्यसलाई पढ्ने मानिसले मात्र बुझ्न सक्छन् । तर एउटा किताब कति महंगो हुन सक्छ भनी कसैले अन्दाज गर्न सक्दैन । यहाँ हामी तपाईं केही किताबका बारेमा बताउँदैछौं..
मोदीको नयाँ नियम, नेपालीले प्लेन चढ्न नपाउने
काठमाडौं । तीर्थाटन, व्यापारलगायत प्रयोजनले भारत आएर शुक्रबार स्वदेश फर्किदै ११ नेपालीलाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उड्न रोक लगाएको छ । तीमध्ये एक जना नेपाल वायुसेवा निगम र १०..
काठमाडौं । सरकारले जेठ २६ गते आइतवार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । भोटो देखाउने जात्रा परेकाले काठमाडौं उपत्यकामा बिदा दिने निर्णय भएको हो । सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने..
अर्चना पनेरुको रेट साढे चार करोड !
काठमाडौं । पोर्नस्टार बन्छु भन्दै भारत बसाइ सकाएर नेपाल छिरेकी अर्चना एक्कासी मिडिया अनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइन । चर्चामा आएको एक बर्षभित्रै उनले दुइ नेपाली फिल्म खेलिन् अनि आधा दर्जनजति..
अबदेखि कर्मचारीलाई भानुभक्तको बिर्खे टोपी अनिवार्य
नेपाली भाषा र साहित्यका धरोहर भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो चुँदीरम्घामा अवस्थित भानुनगरपालिकाले करिब सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिर्खे टोपी अनिवार्य गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैै नगरपालिकाका १३ वडामा बिर्खे टोपी..
भोली बुधबार इदको सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको विशेष पर्व ‘इद उल फित्र’को अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै इद उल फित्रको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार..
अब साझा बसमा भाडा तिर्न पैसा बोक्नै नपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सबै साझा बसमा अब कार्डबाटै भाडा तिर्न सकिने भएको छ। साझा यातायातले आफ्ना ५१ वटा बसमा उपकरण जडान गरेर कार्डमार्फत नै भाडा तिर्न सकिने व्यवस्था..
संसद हो कि भट्टी ? संसद परिसरभित्र रक्सी, चुरोट, खैनी र पानपराग खुलेआम
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा धुम्रपान, मध्यपान प्रतिबन्धित नै हुन्छ । तर देशको कुनै संसद भवन परिसरमै रक्सीका बोतल, चुरोट, खैनी, पान–परागको बट्टाको थुप्रो देखियो भने त्यसलाई के भन्ने ? योजना, नीति,..
अब बिहेको निम्तोमै दुलाहा र दुलहीको उमेर खुलाउनुपर्ने
सिन्धुली । सिन्धुलीमा जति गरे पनि बालविवाह कम भएन। वाक्क भएका सबै स्थानीय तहले मिलेर नयाँ उपाय निकालेका छन्– ‘बिहेको निम्तोपत्रमा बेहुला–बेहुलीको उमेर खुलाउनुपर्ने।’ सिन्धुली बाल विवाहमुक्त जिल्ला बन्न सक्दो..
Results 289: You are at page3of 10